विश्वकपमा सहभागी खेलाडी कस्ता छन् ? - Naya Patrika
विश्वकपमा सहभागी खेलाडी कस्ता छन् ?
फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता विश्वकप बिहीबारदेखि रसियामा सुरु हुँदै छ । सहभागी ३२ राष्ट्र नै च्याम्पियन हुने लक्ष्य राखेका छन् । रसियामा ७ सय ३६ खेलाडीले आ–आफ्ना भाग्य चम्काउने प्रयास गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले रसियामा सहभागी खेलाडीबारे रोचक तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
विश्वकप आउँदा सबै पक्षको विश्लेषण हुने गर्छ । यसपटकको विश्वकपमा क्रोएसियाका लोभ्रे कालिनिक सबैभन्दा अग्ला खेलाडीमा पर्छन् । उनको उचाइ २ सय १ सेन्टिमिटर रहेको छ । विश्वकपमा सहभागी राष्ट्रमा बेल्जियमका दुई खेलाडी शीर्ष १० भित्र छन् । बेल्जियमका थिबाउट काउट्रोस चौथो र कोएन कास्टलिस आठौँ उचाइ भएका खेलाडी हुन् ।
कम उचाइ भएका खेलाडी
धरै तौल र कम उचाइका खेलाडीमा पानामा नै अगाडि रहेको छ । कम उचाइ समूहमा पानामा अल्बर्टो क्विन्टेरो परेका छन् । उनको उचाइ १ सय ६५ सेन्टिमिटर रहेको छ । कम उचाइमा मोरोको र अर्जेन्टिनाका समान २ खेलाडी छन् । जापानका रोयटा ओसिमा र उरुग्वेका लुकास टोरिया सहभागी खेलाडीमध्ये कम उचाइका खेलाडी हुन् ।
धेरै तौल भएका खेलाडी
पहिलोपटक विश्वकपमा पुगेको पानामाका रोमान टोरेस सबैभन्दा बढी तौल भएका खेलाडी हुन् । उनको तौल ९९ केजी रहेको छ । त्यसपछि डेनमार्कका जानिक भेस्टेगार्र्ड र ह्यारी केन संयुक्त रूपमा दोस्रो बढी तौल भएका खेलाडी हुन् । सन् १९६६ पछि दोस्रोपटक विश्व च्याम्पियन बन्ने सपना बोकेर रसिया पुगेको इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन र जानिकको तौल समान ९८ केजी छन् । यसैगरी, इंग्ल्यान्डकै ह्यारी मुगिरे तेस्रो स्थानमा छन् । धेरै तौल भएका खेलाडीको शीर्ष १० भित्र इंग्ल्यान्डका चार खेलाडी छन् ।
कम तौल भएका खेलाडी
विश्वकपमा बढी तौल भएका खेलाडीको चर्चा भइरहँदा कम तौलका पनि कम छैनन् । रसिया विश्वकपमा जापानका ताकासी इनयी, मेक्सिकोका जाभियर अक्विनो तथा मोरोकोका मबार्क बोसोउफा सबैभन्दा कम तौलका खेलाडी हुन् । यी तीनजना खेलाडीका तौल समान ५९ केजी रहेका छन् । इंग्ल्यान्डका जेसे लिन्गार्ड तेस्रो कम तौलका खेलाडीमा पर्छन् । उनको तौल ६० केजी छ ।
विश्वकप इतिहासमा जर्मनी र इंग्ल्यान्डका दुई परिवारका दाजुभाइ विश्व विजेता बनेका छन् । सन् १९५४ मा तत्काल पश्चिम जर्मनीका फ्रिट्ज तथा ओटमार वाल्टरले उपाधि चुमे । सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्डका वाल्टर तथा बबी चाल्टन विश्व विजेता बनेका थिए ।
सबै खेलमा गोल
ब्राजिलका जैरिन्होको नाममा रहेको रेकर्ड अजय नै छ । उनले सन् १९७० को विश्वकपमा ब्राजिलले खेलेका सबै खेलमा कम्तीमा एक गोलको योगदान दिएका थिए । ब्राजिलले त्यही संस्करणमा तेस्रोपटक विश्वकप जितेको थियो ।
कम उचाइका खेलाडी
सन् २०१४ को विश्वकपमा स्विट्जरल्यान्ड सेर्डान साक्विरी कम उचाइका खेलाडी थिए । उनको उचाइ १ मिटर ६३ सेन्टिमिटर थियो । सोही विश्वकपमा क्यामरुनका इडगार साली दोस्रो तथा इटालीका लोरेन्जो तेस्रो कम उचाइका खेलाडी थिए ।
कम तौलका खेलाडी
रसिया विश्वकपमा तीन राष्ट्रका खेलाडी कम तौलका छन् । मेक्सिकोका विगर जाभियर अक्विनो, जापानका स्ट्राइकर ताकासी इनु तथा मोरोकोका मार्क बोसोफा सबैभन्दा कम तौल भएका खेलाडी हुन् । तीनैजनाको समान तौल ५९ केजी छ ।